Ubumba olubomvu luyingxube yobumba obomvu nomhlophe. Ngokwemvelo, ngaleyo ndlela, akukho ubumba obomvana. Indlela kuphela yokuthola ukuhlanganisa ubumba obomvu nomhlophe. Ubumba obomvu akuvamile. Kwenzeka ngokuyinhloko nje eChina, kuyilapho ubumba obumhlophe bungatholakala eYurophu. Ngisho nasezikhathini zasendulo kwakukholelwa ukuthi ubumba obomvu buba nomphumela wokuhlanza esikhumbeni somuntu ngisho nase-aura yakhe. Ama-masks ayenziwe ngobumba obomvu asetshenziswa eGibhithe lasendulo, eGrisi naseChina.
Ubumba obubomvu: ukwakheka, izakhiwo eziwusizo.
Njengamanje, ubumba obomvu busetshenziselwa ukwelashwa kwemvelo enhle kakhulu, enesisindo esikhulu semikhiqizo ewusizo. Ukwakhiwa kobumba kuhlanganisa:
Ngenxa yokwakheka okucebile, ubumba obomvu busetshenziselwa kakhulu e-cosmetology ukuqinisa izinwele nezipikili, ukuhlanza nokuthuthukisa isimo sesikhumba. Ubumba obumnyama buhlinzeka ngokucophelela ukunakekelwa okunesizotha isikhumba esibucayi, esomile nesomzimba. Umkhiqizo onjalo wezithokozi unomthelela we-disinfectant nomphumela olwa nokuvuvukala esikhumba esikhathele ikakhulukazi. Ukutholakala kwezakhiwo eziwusizo, ubumba obomvu busetshenziselwa ukusetshenziswa kwe-cosmetology yasekhaya.
Ubumba obumnyama e-cosmetology ekhaya.
Ubumba obumhlophe buhlanza amangqamuzana esikhumba emhlabathini, emithini yokubola kanye ne-toxin. Uqeda ungqimba lwesikhumba esikhulayo futhi uthuthukise isikhumba nge-oxygen. Ngesikhumba sobuso obunamafutha, ubumba olubomvu luwususa emanzini anqwabelene, futhi luba nemiphumela emincane emasongweni esikhumba, ngaleyo ndlela iwugcobe kancane. Umasikisi wobumba obomvu uyanciphisa izinga lokubonakaliswa kokuphendula okweqile, futhi isikhumba esivulekile nesonakalisiwe sikhipha ukucasula futhi siyasiqinisa.
Ukunakekela izinyawo nezandla.
Ubumba obubomvu bunomphumela wokunciphisa isikhumba esinamandla sezandla endaweni yezinyawo nezinyawo. Amanzi okugeza asetshenziselwa ukwelapha izikebhe, amanxeba amancane nokusikeka. Ubumba obomvu busetshenziselwa ukuqinisa ipulangwe le-nail. I-micronutrients ewusizo ivikela izipikili ekubhentsheni nasekuhlathini.
Ubumba obumnyama obunakekelwa ngumzimba bunomphumela ofanayo, njengokunakekelwa kwesikhumba. Kunomthelela omuhle ekusimeni kwe-metabolism ezingeni leselula, kunciphisa ukuvuvukala esikhumbeni futhi kusize ukususa ubuthi emzimbeni. Amabhati anjengobumba obunjalo anciphisa ukhathala futhi akhulise ithoni yonke yomzimba. Ubumba obumnyama buyasiza ukunciphisa isikhumba nokuthuthukisa ukujikeleza kwegazi.
Ngezinwele ezomile nezomile, iziqu ezenziwe ngobumba obomvu obumnyama ziwusizo kakhulu. Bayabuyisa kahle ukukhanya kwezinwele. Ubumba obumnyama busiza ukugcwalisa izinwele ngezici ezilandelanayo eziwusizo, ngaleyo ndlela zinike amandla. Amaski wokugcoba anconywa ngezinwele ezimele, ezomile, ezingavamile nezingavamile.
Ubumba obumnyama: zokupheka zokupheka emaskini ekhaya.
Yenza i-mask ebumba elinjalo ekhaya lilula. Ngokulingana okulinganayo, ubumba obumhlophe obunziwe obunamanzi obandayo obunamakhaza bubunjwe, emva kwalokho buxubene ngokuphelele kuze kube yilapho kuhlanganiswa ukulinganisa. Kunconywa ukuthi ungasebenzisi izitsha zensimbi yokwenza imaski. Ukuze ubumba obumnyama bungalokothi lulahlekelwe izakhiwo zalo eziwusizo, kufanele buhlanjululwe kuphela ngamanzi abandayo. I-mask esenziwe ngomumo isetshenziswa esikhumbeni. Ngemuva kwemizuzu engu-15, geza imaski ngamanzi afudumele. Akunconywa ukuthi usebenzise ubumba obomvu buhlanjululwe kaningi. Inkambiso elandelako iphumelela khulu ukuhlunga ubumba obomile obusha.
Ukuze ulungise ukugeza kahle, udinga ukuhlanza amagremu angu-100 ebhodini lamanzi abandayo. Ingxube eholayo ingeziwe ebhodini.
Mask for izinwele ngenhloso yokubuyisela.
Izithako ezidingekayo: izipuni ezimbili zobumba; Izipuni ezimbili zekhofi omnyama omhlabathi; Izipuni ezine ezifakwe ijusi lomvini; Isipuni esingu-1 ukhilimu omuncu.
Ukulungiselela: hlanganisa ubumba obomvana ngekhofi. Hlanganisa ingxube nomsila wamagilebhisi, bese ufaka ukhilimu omuncu. I-mask esenziwe ngomumo kufanele isetshenziswe ezinhlanjeni ezimanzi ezihlanziwe. Misa ukuxubha esikhwameni se-scalp kanye nezinwele ukuhambisa ukunyakaza kwemisipha. Faka isicelo semaski esele kulo lonke ubude bezinwele. Ngemuva kwemizuzu engu-40, geza ikhanda ngamanzi afudumele.
Mask ebusweni nomphumela wokuvuselela isikhumba esomile nesivuthiwe.
Izithako ezidingekayo: ubumba obomvana - isipuni esisodwa; amafutha abalulekile amnandi orange - amaconsi amabili; amanzi ahlungiwe - izipuni eziyi-3; i-glycerin yemifino - 1 ithisipuni; Ihotela elilodwa lamafutha abalulekile petitgren ne-neroli.
Ukulungiselela: Dissolve ubumba obomvana ngamanzi. Engeza amafutha abalulekile ku-glycerin. Hlanganisa isixazululo esibumbeni ngamafutha. Gqoka imaski ebusweni imizuzu engu-15. I-mask enjalo ingabangela ukusabela kwesikhumba esiphuthumayo kumafutha abalulekile. Ekuboniseni kokuqala kokushisa, kubalulekile ukugeza imaski ngamanzi amaningi afudumele.
Mask ebusweni ngethonya elithokozelayo esikhumbeni esivulekile nesicasulayo.
Izithako ezidingekayo: i-chamomile amafutha abalulekile - amaconsi amathathu; ubumba obomvana - isipuni esisodwa; ijojoba oil - 1 ithisipuni; umhluzi chamomile - 3 wezipuni.
Ukulungiselela: Ubumba obomvana kufanele buhlanganiswe namanzi. Hlanganisa ngokuphambene amafutha abalulekile namafutha wejojoba. Engeza ingxube yamafutha obunjini bese uxuba kahle. Gqoka imaski ebusweni bese usakaza ngokulinganayo. Ngemuva kwemizuzu engu-10 ungageza ubuso bakho ngamanzi afudumele.
Ubumba obumnyama: ukuphikisana.
Ukungafani kokusebenzisa amaski kulolu daka yilokhu:
Ikhanda likaNyaka Omusha 2017 ngezandla zabo: izinketho ezinhle nezesimfashini kubanikazi bezinwele ezinde, eziphakathi nesikhashana (isithombe, ividiyo)
Ngingenzenjani ngenyanga ekhulayo?
Ngumuphi uhlobo lokudla okumelwe lubonwe ukuze kuqedwe ama-acne?
Ukunakekelwa Kwezinwele: Ukubuyiselwa Okusheshayo
I-Electrolipolysis inciphisa amandla esiswini
Indlela yokuzimela ngokwezimali
Ukuzikhandla kweJapan: izinzuzo namasu okusebenza
Ukudla kwesitashi: izimiso nemikhiqizo
Umthamo wenkathi - inwele yokufakelwa
Umbono wodokotela mayelana nesandulela ngculazi
U-Ksenia Sobchak uphinde wadideka wonke umuntu ngokukhulelwa kwakhe, isithombe
Ikhekhe le-waffle lase-Ukraine
Amahhotela Okungcebeleka Okumnandi
Isizathu sesifo senhliziyo
Iresiphi yasehlobo evela kuNataliya Rudova: inkukhu ebhakawa ngamachibi omuncu
Isaladi "I-Yellow Sun"